Rolled Copper Foils Factory | China akpọrepu ọla kọpa foils emepụta, suppliers
RA Ọla kọpa Foils maka FPC
Ihe mkpuchi ọla kọpa maka bọọdụ sekit bụ ngwaahịa foil ọla mepụtara ma mepụta CIVEN METAL kpọmkwem maka ụlọ ọrụ PCB/FPC. Ihe mkpuchi ọla kọpa a akpọrepu nwere ike dị elu, mgbanwe, ductility na imecha elu ya, na nrụpụta ọkụ ya na ọkụ eletrik dị mma karịa ngwaahịa ndị yiri ya.
Akpadoro ọla kọpa maka batrị
Foil ọla kọpa akpọrọ akpọrọ bụ ihe cathode nke CIVEN METAL mepụtara kpọmkwem maka batrị dị elu. Ọdịdị edo edo na ịdị larịị nke foil ọla kọpa na -eme ka ọ dị mfe mkpuchi ma ọ bụghị ịchapu ya;
Ọla bụ ihe a na -eji ọla kọpa agbaze na ọla ndị ọzọ dị ụkọ ma ọ bụ dị oke ọnụ ahịa. Ngwakọta dị iche iche nke alloys nwere akụrụngwa anụ ahụ na ngwa dị iche iche.
RA Ọla kọpa
A na -akpọ ihe igwe nwere ọdịnaya ọla kọpa kachasị elu. A makwaara ya dị ka ọla kọpa na-acha ọbara ọbara n'ihi na elu ya na-acha ọbara ọbara-acha odo odo. Ọla kọpa nwere nnukwu mgbanwe na ductility. Ọ na -enwekwa ezigbo ọkụ eletrik na ọkụ eletrik.
Gbamgbam plated Ọla kọpa foil
Ngwa ọla kọpa a na -ekpughere n'ikuku na -adịkarị mfe ịzere ikuku na imepụta carbonate ọla kọpa, nke nwere nguzogide dị elu, conductivity eletrik adịghị mma na mwepụ nke ike dị elu; mgbe tin plating, ngwaahịa ọla kọpa na -emepụta ihe nkiri tin dioxide na ikuku n'ihi ihe nke tin metal n'onwe ya iji gbochie ọzere ọzọ.
Beryllium Ọla kọpa foil
Beryllium ọla kọpa foil bụ otu ụdị supersaturated siri ike ngwọta ọla kọpa alloy nke jikọtara ọmarịcha igwe, anụ ahụ, kemịkalụ na nguzogide corrosion. O nwere oke oke ike, oke na -agbanwe agbanwe, ike ike na ike ọgwụgwụ dị ka nchara pụrụ iche mgbe ọgwụgwọ ngwọta na ịka nká.
Ọla kọpa Nickel Foil
A na-akpọkarị ihe ọla kọpa-nickel alloy dị ka ọla kọpa ọcha n'ihi ịdị ọcha ya dị ọcha. ọla kọpa-nickel alloy bụ alloy metal nwere nnukwu nguzogide ma na-ejikarị ya dị ka ihe mgbochi. Ọ nwere ọnụọgụ ọnụnọ ọnụnọ dị ala yana ọkara resistivity (resistivity nke 0.48μΩ · m). Enwere ike iji ya n'ofe oke okpomọkụ.